यसरी छनौट हुनसक्छ नेपाल २०१९ को बिश्वकप, कति छ सम्भावना ? – WicketNepal
WicketNepal Staff, २०७४ माघ ३, बुधबार १३:१३
विकेटनेपाल, ३ माघ – बुधबार
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीले २०१९ आईसीसी एकदिवसीय बिश्व कप छनौटको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको छ।
जिम्बाबेमा आयोजना हुने प्रतियोगिता ६ मार्चमा सुरु भइ २५ मार्चमा सकिनेछ। बिश्व कप २०१९ इंग्ल्याण्डले आयोजना गर्नेछ जसमा मात्र १० टिम सहभागी हुनेछन्।
सहभागी टिमहरु :- वेस्ट इन्डिज, जिम्बाबे, अफगानिस्तान, आयरल्याण्ड, स्कटल्याण्ड, नेदरल्याण्ड, पपुवा न्यु गिनी, हंगकंग र २ टिम ( डिभिजन-२ मा उत्कृस्ट हुने २ टिम )
सहभागी हुने १० वटा टिमलाई २ समुहमा बिभाजन गरीएको छ। समुह चरणमा सबै टिमले एकअर्कासंग १-१ खेल खेल्नेछन् जसपछि दुवै समुहबाट उत्कृस्ट-३ हुने टिम सुपर-सिक्स चरण खेल्न छनौट हुनेछ। सुपर सिक्स चरणमा एउटा टिमले ३ वटा खेल खेल्ने छ ( समुह चरणमा भेट नभएका टिमसंग मात्र )। समुह चरणमा पाएको अंक समेत सुपर सिक्स चरणमा जोडिनेछ ( समुह चरणको अंक तालिकामा तलको २ स्थानमा रहेका टिमसंगको अंक बाहेक )। सुपर सिक्स चरणपछि फाइनल पुग्ने उत्कृस्ट २ हुने टिम बिश्व कप २०१९ खेल्न छनौट हुनेछ।
( ग्राफिक्स – अफगानिस्तान क्रिकेट )
बिश्व कप छनौट खेल्ने ८ टिम तय भैसकेको छ भने बाँकी २ टिमको निर्क्योल नेपाल लगायत ६ रास्ट्र सहभागी हुने आईसीसी बिश्व क्रिकेट लिग डिभिजन-२ बाट हुनेछ। आईसीसीले जारि गरेको प्रेस बक्तव्यमा बिश्वकप छनौट प्रतियोगितामा उत्कृस्ट ३ हुने एसोसिएट सदस्यले सन् २०२२ सम्मको लागि एकदिवसीय रास्ट्रको मान्यता पाउनेछ।
के छ नेपालको सम्भावना ?
नेपाल २०१५-१७ मा संचालित बिश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपबाट डिभिजन-२ मा केन्या, युएई र नामिबियासंगै घटुवा भएको टिम हो। च्याम्पियनसिप तालिकामा नेपाल सातौं स्थानमा रहेको थियो भने केन्या पाँचौ, युएई छैठौं र नामिबिया आठौं स्थानमा रहेको थियो। क्यानडा र ओमान डिभिजन-३ बाट उक्लंदै डिभिजन-२ मा आएको हो।
फेब्रुअरी ८ देखि १५ सम्म आयोजना हुने डिभिजन-२ मा नेपाल सहित नामिबिया, क्यानडा, ओमान, युएई र केन्या सहभागी हुँदैछन्।डिभिजन-२ मा सबै टिमले एकअर्कासंग १-१ खेल खेल्नेछन् जसको आधारमा अंक तालिकामा उत्कृस्ट २ हुने टिमले २०१९ एकदिवसीय बिश्वकप छनौट खेल्न पाउनेछ।
बिश्वकप २०१९ र छनौट प्रतियोगिता खेल्न भन्दा पनि नेपाललाई त्यसअघि डिभिजन-२ मै उत्कृस्ट-२ हुनु चुनौतीपूर्ण रहेको छ। नेपाल डिभिजन-२ बाट उक्लिएपनि बिश्व कप छनौटको उत्कृस्ट-२ भित्र पर्न चमत्कारनै गर्नुपर्नेछ। किनकि बिश्व कप छनौट खेल्ने टिमहरु वेस्ट इन्डिज, जिम्बाबे, आयरल्याण्ड, अफगानिस्तान जस्ता टिमहरु नेपालको स्तर भन्दा निकै माथिका टिम हुन्।
डिभिजन-२ बाट माथि उक्लियो भने बिश्वकप छनौट प्रतियोगितामा नेपालको लक्ष उत्कृस्ट ३ एसोसीएट रास्ट्र हुँदै एकदिवसीय रास्ट्रको मान्यता पाउनु पनि हुनेछ। अफगानिस्तान र आयरल्याण्डले टेस्ट रास्ट्रको मान्यता पाइसकेको अवस्थामा बिश्वकप छनौटको उत्कृस्ट ३ एसोसीएट रास्ट्र भित्र पर्नु निकै ठुलो चुनौती पनि हैन।
बिश्वकप छनौटसम्म नेपाल यदी पुग्न सक्ने हो भने नेपालको सुपर सिक्स चरणसम्म छनौट हुने सम्भावना पनि रहन्छ। आईसीसीले आयोजना गर्ने छनौट प्रतियोगितामा उथलपुथल पूर्ण नतिजा नयाँ कुरा हैन जहाँ कुन टिमले कतिबेला जित्छ र अंकतालिकाको रुप कतिबेला परिवर्तन हुन्छ आंकलन गर्न सकिंदैन।
बिश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपको पछिल्लो केहि खेल हेर्ने हो भने पनि नेपाल युएई र हंगकंग जस्तो टिमसंग पराजित भएको थियो।अर्कोतर्फ नेपालको डिभिजन-२ को लागि तयारी पनि राम्रो हुन सकेको छैन। डिभिजन-२ अघि दक्षिण अफ्रीका अभ्यासको लागि जाने चाहना पनि नेपालको पुरा हुन पाएन र नामिबिया जानु अघि युएईको स्थानीय टिमसंग नेपालले ३ वटा अभ्यास खेल खेल्नेछ।
बिश्वकप २०१९ खेल्न भन्दा पनि नेपाललाई डिभिजन-२ मै उत्कृस्ट २ हुनु चुनौतीपूर्ण
बिदेशी प्रशिक्षकको रुपमा पनि नेपालले चाहेको मोन्टि देसाई नेपाल छोटो समयको लागि आउन नमान्दा भारतको रणजी स्तरका प्रशिक्षक सुलक्षण कुलकर्नी नेपाल आउने भएका छन्। यो भन्दा अघि नेपाल नआएका र नेपाली क्रिकेटको बारेमा थाहा नभएका प्रशिक्षकलाई खेलाडीहरुको बारेमा बुझ्ननै समय लाग्नेछ जसकारण छोटो समयको लागि आउने प्रशिक्षक प्रभावकारी हुने कुरामा संका गर्न सकिन्छ।
सम्भावनाको हिसाबले हेर्ने हो भने नेपाली क्रिकेट टिमले बिगतमा आफ्नो प्रदर्शनले चमत्कारिक नतिजा हात पार्न सक्ने टिमको रुपमा आफुलाई प्रमाणित गर्न चुकेको छैन। भाग्यले पनि नेपाललाई ठुला प्रतियोगिताहरुमा साथ दिने गरेको छ। सन् २०१० को डिभिजन-५ होस् या एसीसी टि-२० २०११ यात बर्मुडाको २०१३ डिभिजन-३ सबैमा नेपाललाई अघिल्लो चरण प्रवेश गर्न भाग्यले पनि साथ दिएको थियो।
बिश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपमा भने नेपाललाई भाग्यले साथ दिएन र केहि खेलहरु निकै थोरै अन्तरले गुमाउन पुग्यो। च्याम्पियनसिपको अन्तिम केहि खेलहरुमा नेपालको ब्याटिंग पक्ष निकै खराब देखियो जुन पक्ष सुधार गर्न नेपालले फ्लप ब्याट्सम्यान बिनोद भण्डारी र सागर पुनलाई प्रारम्भिक टिममानै राखेको छैन। डिभिजन-२ मा नेपालको ब्याटिंग पक्ष सुधार हुने हो भने नेपालको पक्षमा नतिजा आउने सम्भावना धेरै रहन्छ। तर नामिबियाको उछाल र गति भएको पिचमा नेपाली ब्याट्सम्यानहरुलाई ब्याटिंग गर्न चुनौतीपूर्ण हुने पक्का छ।
चिन्नुस नेपाल आउन लागेका बिदेशी प्रशिक्षक, यसकारण आएनन् देसाई